Seerri saba Oromoof hin hojjanne,saba Amaaraaf ni hojjata! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooSeerri saba Oromoof hin hojjanne,saba Amaaraaf ni hojjata!
Seerri saba Oromoof hin hojjanne,saba Amaaraaf ni hojjata!
Akkuma yaadatamu fi ragaan Video jirutti walga’ii dhaabota siyaasaa affeere,kan Bordiin Filannoo qopheessee midiyaaleef ibsa laachaa ture irratti gaaffiin Jaal.#BatteeUrgeessaa kaase akkas ture…” Hogganoonni fi kaadhimamtoonni keenya hedduun mana hidhaa jiru.Kaadhimamtoonni keenya kun hamma manni murtii ragaa qabatamaa argatee irratti hirmurteessin fi shakkiidhaan qabaman kun filannoo irratti hirmaachuu hin danda’anii,seerri Boordii Filannoo akkamitti ilaala?” Kan jedhu ture!
#BurtukaanMidhagsaa yeroo deebii laattu ” Kaadhimamtoonni siyaasaa kamuu hamma qaama seeraa jala jiranitti filannoof dhihaachuu hin danda’an” jechuun gaaffii Jaal.Battee bifa kanaan deebifte.
Gidduu kana immoo dhaabni #Baaldaraas finfinnee mandheeffatee goolaa jiru hogganni isaa #IskindiirNaggaa fi kaadhimamtoonni kaan akka filannootti hirmaachuu danda’an mana murtii olaanaatti raggaasifatanii jiru.
Darbees Boordiin Filannoo Ethiopia ibsa har’a baaseen kaadhimamtoonni #Baaldaraaas mana hidhaa jiran akka Filannoo irratti hirmaachuu danda’an eyyameera!!!
Ilaalaa egaa seerri Oromoof hojjachuu dide,ifatti Amaaraaf hojjataa jira. Dhaabni Oromoo yeroo kanatti filannoo keessatti hirmaachaa jiran jiraachuu baatanis,dhiibbaan isaan irratti godhame filannoo keessaa akka bahaan kan taasise hoggantoota fi kaadhimamtoota jumlaan hidhuu fi filannoo irrattis akka hin hirmaanne gochuu ture.
Oromoon kan gochuu qabu Oromiyaa keessatti dhaabni Habashaa kamuu PP dabalatee maqaa filannoon akka hin sochoone goolii uumuudha.
The Scramble for Ethiopia (By Dawit W Giorgis )
Starvation ‘used as a weapon of war’ as Ethiopia nears brink of famine